Lola Tigiraay: US loltoonni Ertiraa Tigiraay keessa atattamaan akka bahan gaafatte | OROMSIIS OROMO
Leave a Comment	/ January 27, 2021 June 22, 2021
Ibsa Isteet Dippaartment addatti BBC’f ergee, “Qaamolee Tigiraay keessa socho’aniin da’oo baqattootaa keessatti saamichi, miidhaan saalarratti hunda’eefi sarbamni mirgoota namoomaa biroofi dararaan jirachuu gabaasaaleen qabatamaan jiru,” jedheera.
Dabalataanis, waajjirichi ibsa isaa kanaan ‘loltoonni Ertiraa hunduu Tigiraay keessaa atattamaan bahuu qabu” jechuun gaafateera.
Loltoota Ertiraa hangamtu Tigiraay keessa jiraafi addatti ammoo eessa akka jiran garuu ifa miti kan jedhe ibsi kun, humnoonni Ertiraa karaa gama daangaa isaaniitiin Tigiraaitti lola banan. Dabalataan ammoo, loltoonni mootummaa Itoophiyaa hangi tokkos karaa daangaa gama kaabaatiin Ertiraa waliin Tigiraay seenan jedha.
Akka ibsa Isteet Dippaartment kanaatti, lolli itti fufuun Tigiraay keessa riphe-loltummaan yeroo dheeraaf akka itti fufu gochuun Kaaba Itoophiyaatti nagaa dhabamsiisa, akkasumas guutummaa biyyattiitti ammoo muddama saboota gidduutti uumuu mala.
Kun ammoo dimokiraasiifi rifoormii Ministira Muummee Abiy Ahimad kan US beekamtii kenniteef qofa balaarra buusu miti, kan jedhe ibsichi, biyyi ollaa Somaaliyaan kan Itoophiyaan humna nagaa eegan keessaa baafattetti tasgabbii dhabuu hammeessa jedhe.
Mootummaa ce’umsaa Sudaan kan silaayyu rakkooleen hamoon mudachaa jirus dadhabsiisu mala jedhe ibsii Isteet Dippaartment kun.